Ngwuregwu mgbatị ahụ, mgbatị ahụ, arịa mgbatị - Baisheng
Chart Production Chart
Ngwa mgbatị ahụ
"Ndị mmadụ na-elekwasị anya" bụ ntọala nke ọdịbendị ụlọ ọrụ anyị. "Uru bara ụba, ezigbo ihe omimi, nkwanye ùgwù maka ụmụ mmadụ na ịrụ ọrụ na-aga n'ihu" bụ ụkpụrụ azụmahịa anyị. Anyị ga-akwalite mmụọ na mmụọ n'ezie, na-eji akụrụngwa mbụ wee rụọ ngwaahịa kachasị mma.
0 Ngwongwo akuko nke igwe eji eme njem
Ime ụgbọ ala BS-6521
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD nke puru iche banyere nyocha na n'ichepụta akụrụngwa. BS SPORTS nwere nnukwu ego US Dolla 3, na-ekpuchi mpaghara ala karịa 10000 square.
Azụmaahịa BS SPORTS na-ekpuchi R&D, Mmepụta, Azụmaahịa na mgbe azụmaahịa nke akụrụngwa mgbatị azụmahịa, mgbatị ụlọ yana ngwaahịa ndị ọzọ metụtara.Ọ na-eresị ngwaahịa 70% na North America, Eastern Europe, Middle East, Taiwan, ongKong wdg.
Akụrụngwa mmega ahụ ị nwere ike ịzụta maka mgbatị ahụ ụlọ ka kọlọ na-aga n'ihu
Nhazi ụlọ mgbatị ahụ zuru oke pụtara na ị gaghị akwụ ụgwọ maka ndị otu mgbatị ma ọ bụ ọzụzụ onwe gị. Nanị ihe ịchọrọ bụ akụrụngwa mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị. Ngwá ọrụ gị ịhọrọ ga-adịkwa iche dabere n'ogo mgbatị gị na ihe mgbaru ọsọ gị. Na-achọ ifelata? Might nwere ike ịhọrọ iji calorie na c ...
Ihe nkiri egwuregwu China
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD ga-aga China Sport Show na Shanghai na Mee, 2020 ga-aga kwa ihe ngosi nke mba ọzọ dị ka Vietnam, India wdg.
Adreesị: .2zọ No.2 Zhengxian, Paoche Town, Pizhou City, Jiangsu Province, China
Ekwentị mkpanaka: 86- (0) 516-66220516
Ozi E-mail henry@xzbaisheng.com
Ozi E-mail 8000002@b.qq.com